ABDI ILEY OO QIRTAY IN UU ASAGA KA DANBEEYEY QORSHAHA XASUUQII KA DHACAY BALBALAYTII | Faafan News
ABDI ILEY OO QIRTAY IN UU ASAGA KA DANBEEYEY QORSHAHA XASUUQII KA DHACAY BALBALAYTII
February 9, 2018 | Filed under: dhacdooyinka,WARARKA MAANTA | Posted by: admin
xog dheeri ah oo la xidhiidha kulankii Cabdi Iley iyo Lemma Megersa. Xogta aan helnay ayaa sheegayaa in Cabdi Iley Madaxweynaha Oromadda ka codsaday in ay is cafiyaan.
Lemma Megersa ayaa Cabdi Iley u sheegay in shaqsiyan wixii labadooda dhex maray ee hadal ah uu raali ka yahay in ay is cafiyaan. Hase ahaate Lemma ayaa ku nuuxnuuxsaday in wixii danbiyo ah ee laga galay shacab sida barakacin, dil iyo dhac ay u taal hay’ad dawladdu ay u xil saartay; Cabdi iyo Isaga toona ayna awood u lahayn inay saamaxaan.
Cabdi Iley ayaa ku hadlay hadal Lemma aad ula yaabay oo ah “wixii dambi dhacay oo dhan anigaa dhabarka u ridanaya. Adiga dhankaaga uun yaan la iga soo galin”.
waxaa kaloo qirtay in xasuuqii Balbalaytii uu qorshaheeda lahaa asaga iyo saraakiil Tigree ah oo uu ka amar qaato laakiin muuna sheegin saraakiisha magac yadooda cabsi darteed
. Waa ayaan daro in kursi dartii looga shaqeeyo xasuuq sidaa u ba’an oo kiis bax u noqday Cabdi Iley.
Xogtan aan hellay ayaa ah in Cabdi Iley uu laalush siiyay taliyaashii ciidanka qaranka ee maatida ilaalinayay si ay uga tagaan dadka ay ilaalinayeen. Arintan ayaa la sheegayaa inay ka wada socdeen taliyaha ciidanka qaranka ee bariga Itoobiya General Ma’asho.
Sida xog-ogaal shirka fadhiyay uu noo xaqiijiyay Lemma Megersa ayaa markii Cabdi qolkii ka baxay la hadlay masuuliyiiintii Oroomadda ee la soctay yidhina sidan:
“Waad aragtaan waxa 7 malyan oo Soomaali ah madax looga dhigay. Ninkii u haystay inaan Soomaali is haynoow wakaa ninka xukuma sidaad aragtaan u dhaqmaya. Dambiga laga galay soomaalida ummad laga galay majirto. Meeshan dad ayay xawaalad u tahay ee deegaan quman oo is maamula maaha”.